हरिवंश र स्वस्तिमाको’कर्कलो कोक्याउला’कस्तो छ ? (भिडियो) « Ramailo छ
हरिवंश र स्वस्तिमाको’कर्कलो कोक्याउला’कस्तो छ ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jan 13, 2022
समय : 5:06 pm
बरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यको शब्द, संगीत र स्वरमा ’कर्कलो कोक्याउला’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा झुक्याएर चेलिबेटी बेचबिखन गर्ने गिरोहको कथालाई देखाइएको छ । ‘कालो केशमा’ जस्तो सफल गीति भिडियोका निर्देशक मानव सुवेदी निर्देशित ‘कर्कलो कोक्याउला’को भिडियो राम्रो बनेको छ । भिडियो हेर्नुस् :
गीतको भिडियोमा हरिवंश आचार्य र स्वस्तिमा खड्काको मुख्य भूमिका छ । हरिवंश र स्वस्तिमाको साथमा भिडियोमा महेश त्रिपाठी, नविन लम्साल र घनश्याम पाण्डेले अभिनय गरेका छन् । भिडियाको पटकथा नायिका सुरक्षा पन्तको छ । छायाँकन शुसिल सापकोटाको हो । किरण तुलाधरले एरेन्ज गरेको गीतलाई श्याम श्वेत रसाइलीले मिक्सिङ्ग गरेका छन् ।
बिहिबार राजधानीमा प्रेसमिट गर्दै ‘कर्कलो कोक्याउला’को भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा माईती नेपालका अध्यक्ष अनुराधा कोइराला थिइन् ।